अर्थतन्त्र Archives - Mitho Khabar
October 25, 2020 mithokhabarLeaveaComment on लाख पुगेको सुनको मूल्य आज सोच्नै नसकिने गरी यस्तो भयो ।
काठमाडौं । आज सुनको मूल्य तोलामा २ सयले बढेको छ । बुधबार सुनको मूल्य तोलामा ९५ हजार ५ सयमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा २ सयले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघकाअनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९५ हजार ७ सय कायम गरिएको छ भने तेजावी सुनको मूल्य ९५ हजार २ सय रहेको […]
October 21, 2020 mithokhabarLeaveaComment on लाखौं पुगेको सुनको मूल्य आज सोच्नै नसकिने गरी यस्तो भयो ।
काठमाडौ । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मुल्य स्थिर रहेको छ । सोमबार तोलामा ९४ हजार ७ सयमा कारोबार भएको सुनको मुल्य आज पनि सोहि मुल्यमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य ९४ हजार २ सय रहेको छ । त्यस्तैगरी आज आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला १२१० रहेको महासंघले […]
October 21, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on तीन महिनामा ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको मोबाइल फोन आयात
तीन महिनामा ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको मोबाइल फोन आयात काठमाडौं: यसअघि सबैभन्दा धेरै आयात हुने डिजेललाई समेत उछिन्दै मोबाइल फोन नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने सूचीको शीर्ष स्थानमा परेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तीन महिनामै नेपालमा ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको मोबाइल फोन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । बढ्दो […]
October 19, 2020 mithokhabarLeaveaComment on आजको सुनको भाउ बजारमा कती छ ?
पछिल्लाे समय सुनकाे भाउकाे निकै चलपल रहेकाे छ । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज हात्तै बढेको छ । शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा ९४ हजार ३ सयमा कारोबार भएको आज तोलामा २ सयले बढेको हो । आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९४ हजार ५ सय कायम गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएकाे छ । त्यस्तै, तेजावी […]
October 18, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on शेयर बजारमा सर्वाधिक बजार पूँजीकरण भएका दश कम्पनीहरु मध्य यो साता तीन कम्पनीको मात्र बजार पूँजीकरण बृद्धि
काठमाडौं: शेयर बजारमा सर्वाधिक बजार पूँजीकरण भएका दश कम्पनीहरु मध्य यो साता तीन कम्पनीको मात्र बजार पूँजीकरण बृद्धि भएको छ । नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र एनआईसी एशिया बैंकको शेयरको मूल्य गत साताभन्दा यो साता बढी भएको हो । नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी शेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुमध्य सर्वाधिक बजार पूँजीकरण भएको कम्पनी हो । […]
October 17, 2020 mithokhabarLeaveaComment on वीरगञ्जमा साढे २२ किलो सुन बरामद
पर्सा- पर्साको वीरगञ्जबाट साढे २२ किलो सुन बरामद भएको छ । प्रहरीले वीरगञ्ज महानगरपालिका-६,रेशमकोठीसिथत गणेश अपार्टमेन्टमा छापा मारेर साढे २२ किलो सुन बरामद गरेको हो । प्रहरीका अनुसार निलो प्लास्टिकमा पोको पारिएको अवस्थामा २२ किलो ५६७ ग्राम सुन बरामद गरिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका एसपी गंगा पन्त नेतृत्वको टोलीले सो सुन बरामद गरेको […]
October 6, 2020 Praveen KandelLeaveaComment on घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं : नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ। आइतबार प्रतितोला रु ९४ हजार ५०० मा कारोबार भएको छापावाला सुन आज प्रतितोला रु ९४ हजार १०० मा कारोबार भएको छ। आइतबारको तुलनामा छापावाला सुन रु ४०० ले घटेको हो। यस्तै तेजाबी सुन आइतबारको तुलनामा रु ४०० ले ओरालो लागेको छ। आइतबार प्रतितोला रु […]
September 23, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on Breaking – सोच्नै नसकिने गरि ह्वात्तै घट्यो प्याजको मुल्य !
July 7, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् तोलामा कति पुग्यो ?
ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् तोलामा कति पुग्यो ? काठमाडौ, असार २३- मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मुल्य बढेको छ । आज सुनको मुल्य तोलामा ७ सय रुप्रैयाले बढेर प्रतितोला ९० हजार ९ सय रुप्रैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघले जनाएको छ । सोमबार प्रतितोला ९० हजार २ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य […]
July 6, 2020 Praveen KandelLeaveaComment on बजेट खर्च नहुने रोग तल्लो तहमा पनि उस्तै, प्रदेश ३७ र स्थानीय तहको खर्च ५० प्रतिशतमात्रै
काठमाडौं: बजेट खर्च गर्नेमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह पनि संघ कै गतिमा देखिएका छन् । चालु आवको असार १७ गतेसम्म संघ सरकारले कुल विनियोजित बजेटको ६२.६३ प्रतिशत खर्च गरेका छ भने प्रदेश सरकारले ३६.७८ प्रतिशत र स्थानीय तहले ४९.३७ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । सातवटै प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि कुल २ खर्ब ७५ […]